आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट (यस्तो छन् मुख्य मुख्य बुदाँ) • Pokhara News by Ganthan
प्रकाशित १६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०६:३६
काठमाडौं, १६ जेठ /सरकारले आगामी २०७६/७७ वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट पेस गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्षका लागि चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब, पूँजीगतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब तथा वित्तीयतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब सहित १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि ९ खर्ब ८१ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने र २ खर्ब ९८ अर्ब अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र ५७ अर्ब सहायताबाट ल्याउन बताए ।
सरकारले १ सय ९५ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने भएको छ । खतिवडाले यो वर्षको बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक २०७६/७७ लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै कर्मचारीको तलब बृद्धि गरेका छन् ।
राजपत्राकिंतको १८ प्रतिशत र राजपत्रअनकिंतको २० प्रतिशत तलब बृद्धि गरेको छ ।
सरकारले विभिन्न पदमा फरक फरक अनुपातमा आधारभूत तलब बढाएको उल्लेख गरे ।
रेलमार्गहरुको लागि आगामी वर्षमा ७ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि साढे ४ अर्ब बजेट पाएको रेलमागले पाएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । यो बजेट मुख्य रुपमा रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहण लगायतका काममा खर्च हुनेछ ।
सरकारले चीन तथा भारतलाई रेलमार्गले काठमाडौंमा जोड्ने महत्वकांक्षी आयोजना अघि बढाउने बताए । रक्सौल काठमाडौं र केरुङ काठमाडौं जोड्ने रेल अनुदानमा बनाइदिन नेपालले भारत र चीनसामू प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै काठमाडौं लुम्बनी र काठमाडौं पोखरा जोड्ने रेल, काठमाडौंमा मोनो वा मेट्रो रेल बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा थप १ रुपैयाँ शुल्क लिने भएको छ । सरकारले सडकको मर्मतका लागि भन्दै थप १ रुपैयाँ शुल्क लिने घोषणा गरेको हो ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सडक मर्मतमा बजेटको अभाव हुन नदिन पेट्रोल र डिजेलबाट प्रतिलिटर थप १ रुपैयाँ सरकारले लिने बताएका हुन् ।
यो घोषणासँगै अब पेट्रोल र डिजेलको मूल्य वृद्धि हुने भएको छ । यसअघि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निमार्णका लागि भन्दै पेट्रोल र डिजेलका उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ उठाएको थियो ।
स्वास्थ्य बीमालाई देशभर पु¥याउने घोषणा गरेका छन् । सरकारले त्यसका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने भएको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा पुर्याउने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी गराए । उनले अहिले ५० हजार रहेको विमा रकमलाई १ लाख रुपैया पु¥याउने घोषणा गरेको छ ।
यस्तै गरिबी रेखामुनी रहेका र जेष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले व्योहोर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने बीमांक रकम एक लाख रुपैयाँलाई निरन्तरता दिएको छ ।
जग्गा भाडामा लिई कृषी तथा अन्य व्यवसाय गर्ने ब्यवस्था गर्ने बताएका छन् । पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको प्रस्तुत गरे ।
बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई सहकारी र निजी क्षेत्रसँग मिलेर सञ्चालन गरिने योजना छ ।
नेपाली उत्पादन सामग्री, सिमेन्ट, डण्डी र रङ सकभर नेपाली उत्पादन नै प्रयोग गर्ने घोषणा गरे । औद्योगिक पुर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब ८७ करोड छुट्याइएको बताए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब एक करोड बजेट छुट्याएको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले बेरोजगार युवालाई न्युनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा नै यो कार्यक्रमको सुरुआत गरेको थियो ।
सरकारले बेरोजगारलाई कम्तिमा सय दिन काम दिन नसके वाषिर्क २५ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ भत्ता दिन अघिल्लो बर्षको बजेटमा उल्लेख थियो ।
यो वर्ष मात्रै यस कार्यक्रमका लागि २ अर्बभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहलाई अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराइएको छ । जसमार्फत यसै वर्ष १ लाखभन्दा बढी युवालाई ६० दिन दिनको काम दिने सरकारी तयारी छ ।
सामाजीक सुरक्षा र जेष्ठ नागरिकको भत्ता बढ्यो
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको भत्ता बढाएको छ । गर्भावस्थाद वृद्धावस्था सम्मलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घोषणा गरेका छन् ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने भत्ता बढाएर ३ हजार बनाइएको छ । यसअघि २ हजार दिँइदै आएकोमा १ हजार थपेर ३ हजार पु¥याएको हो ।
अन्य क्षेत्रमा दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता १ हजार बढाइएको खतिवडाले बताए । करिब २१ लाख नागरिकका लागि यसरी भत्ता बढाइएको उनले उल्लेख गरे ।
बृद्धा भत्ताबाट १३ लाख र सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तरगत ९ लाख लाभाम्बीत हुने उनले बताए ।
सांसदले ६ करोड आफूखुसी खर्च गर्ने
अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसदले आफूखुसी आयोजना छनोट गर्ने र बजेट खर्च गर्न सक्ने रकम बढाइदिएका छन्।
गतवर्ष ४ करोड बजेट दिएका खतिवडाले यसवर्ष ६ करोड बजेट दिएका छन्। उनले यस्तो बजेट खर्च गर्ने कार्य्विधि संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसदलाई विनियोजनमा सहभागी गराउने जनाएका छन् ।
हवाई पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रको बजेट घट्यो
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको बजेट घटाएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा यसवर्ष ४० करोड रुपैयाँ कम बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
यस वर्ष सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ दिएको छ । चालू वर्ष ८३ अर्ब ८९ करोड बजेट रहेको छ । सरकारले यस वर्ष बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि १३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
त्यस्तै हवाई पूर्वाधारमा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कम बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष १९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा यसवर्ष १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।
धेरै बजेट पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा
बजेटको सबभन्दा ठूलो खर्च पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई छुट्याएका छन् । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग चार लेनको बनाउन १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
त्यस्तै नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याकमा १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। सरकारले बजेटमा सडकलाई अन्त्यन्त धेरै प्राथमिकता दिएको छ।
पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको ४ सय ३५ किलोमिटर पीच गर्न १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। हुलाकी राजमार्गको ३ सय ५० किलोमिटर लागि १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि १३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
#budget 2076/77#आर्थिक वर्ष २०७६/०७७#बजेट#बजेट २०७६/७७
पोखरामा दुर्घटना, पत्रकार उमेश पुनको हात बाचियो, सुमनको दाँत १६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०६:३६
सडकबाट खसेर एक जनाको मृत्यु १६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०६:३६
हिउ पहिरोमा बेपत्ताको खोजीको कामलाई निरन्तरता दिन टानको माग १६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०६:३६
पोखराको अर्मलामा श्रीपञ्चमीमा मेलामा पर्वतिय दौड हुने १६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०६:३६
मादी डान्स आइडलको उपाधि शाहीलाई १६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०६:३६
कर्मचारी नहुँदा दुई महिनादेखी विषादी मापन प्रयोगशाला बन्द १६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०६:३६
फेवाबजारमा अफर भित्रको अफरः १ रुपैयाँमा १ केजी चिनी १६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०६:३६
माछापुच्छ«ेमा राष्ट्रपति रनिङशिल्ड अन्तर विद्यालय खेलकूद जारी १६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०६:३६
क्यान इन्फोटेक पोखरामा फागुन ११ देखि १६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०६:३६
पोखराको रानीपौवामा मेडिप्लस हस्पिटल एण्ड ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा १६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०६:३६